Kobaca dhaqaalaha oo kor u kacay iyo shaqa la'aanta oo yaraatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kobaca dhaqaalaha oo kor u kacay iyo shaqa la'aanta oo yaraatay
La cusbooneeyay tisdag 18 april 2017 kl 13.32
La daabacay tisdag 18 april 2017 kl 18.04
Dooddii miisaaniyadda guga ee baarlamanka
Miisaaniyadda guga. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Ciidanka ammaanka, tacliinta iyo cimilada ayaa ka mid ah hayadaha miisaaniyadda dheeriga ah loogu kordhiyay miisaaniyadda guga oo ay maanta soo ban-dhigtay wasirka miisaaniyadda Sweden, Magdalena Andersson.
Mushaarooyinka dhexe iyo kuwa sare ayaa sidoo kale la fileyaa in canshuuraha lagu kordhiyo, halka canshuurta laga dhimi doono gunnada howl-gabka.
Waxyaabo badan oo ka mid ah gunnada guga ayaa horay loo soo ban-dhigay, hase yeeshee maanta si cad loo bayaanyay miisaaniyadda guga iyo wax ka badalka miisaaniyadda guga ee sannadka 2017.
- 500 oo malyan oo dheeri ah ayaannu cimilada u qoondeeyney miisaaniyadda guga iyo sidii loo dhimi lahaa wasakhda cimilada lagu sii daayo loona abuuri lahaa shaqooyin hor leh. Sweden waxay kaloo dhisi doontaa ammaan guud. Sidaa daraadeed ayay dawladdu dib u soo nooleeysay howlihii shaqada qaranka, isla-markaana wasaaradda loo qoondeeyey 500 oo malyan oo koronka iswiidhishka iyo sidii loo adkeeyn lahaa difaaca guud ee qaranka, sida ay sheegtay wasiirka dhaqaalaha Sweden Magdalena Andersson oo ka qayb qaadanaysay dooddii miisaaniyadda guga ee sannadka.
Ulf Kristersson, af-hayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga Moderaterna ayaa doodda miisaaniyadda guga ee xisbiyada ku dhaleeceeyay in dawladdu indhaha ka qabsaneeyso caqabadaha dalka ka jira.
- Saaka arroortii waxaa miisaaniyad soo ban-dhigay dawlad qanac-san. Waana qanac-sanaan xaqiiqda ka fog. Isagoo hadalkiisii sii watana sheegay in aan marna la soo carabaabin farqiga sii kordhaya ee u dhexeeya shaqaalaha iswiidhishka iyo kuwa asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa. Dalka ayay soo caga-dhigan doonaan tiro nus malyan gaarsii-san inta u dhexeeysa 2010-2020. Waa dadyoow loo baahan yahay in suuqa shaqada laga qeyb geliyo ama ey ku noolaadaan dhaqaalaha ceeydha.
- Farqiga u dhexeeya iswiidhishka dalka ku dhasha iyo kuwa dibadda ku dhasha ayaa aad kor ugu sii kacaya. Waa maxay sababta ay dawladdu eray uga oran wayday mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hor-yaala, sida uu sheegay Ulf Kristersson, af-hayeenka arrimmaha dhaqaalaha ee xisbiga Moderaterna.
Halka ay wasiirka maaliyadda Magdalena Andersson (S) sheegtay in loo baahan yahay howlo kala duwan sidii caqabadahaa wax looga qaban lahaa. Dhallinyaradu waa iney tacliin helaan, xirfadleydu waa in xirfaddooda kor loo qaado, halka dadka waawaayen u baahan yihiin goobo ey ka howl-galaan oo lagu miisaaniyad geliyo, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo - subventionerade anställningar.
- Dhammaan howlahaasina waa kuwo ay dawladdu ku heelan tahay isla-markaana ay halkeeda ka sii wadi doonto, sida ay sheegtay Magdalena Andersson.
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa soo jeediyay in la helo tiro ciidan ammaan ah iyo kalkaalisooyin caafimaad ee inta maanta ka badan.
Xisbiga Center-ka ayaan sidoo kale ku qanacsanayn miisaaniyadda guga ee dawladdu saaka soo ban-dhigtay.
- Waxaannu albaabka u taagan nahey xaalad kobac dhaqaale oo sarreeya oo farahayaga ka sii baxaya. Bulshada Sweden ayaa u kala jabeeysa garab shaqeeya iyo garab shaqa la'aan ku sugan, magaalo iyo miyi, dadyoowga dalka ku dhashey iyo kuwa dibadda ka soo jeeda, sida uu sheegay Emil Källström (C), af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Center-ka.
Af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Kristdemokraterna Jakob Forssmed ayaa aamin-san in howsha ugu ballaaran ee Sweden hor-taala ay tahay farqiga sii kordhaya ee u dhexeeya suuqa shaqada, dadyoowga dalka ku cusub iyo waayeelka dibadda ka taagan suuqa shaqada.
- Farqiga ugu ballaaran wuxuu u dhexeeyaa shaqaalaha iyo dadyoowga dibadda ka taagan suuqa shaqada, sidaa ayay u tahay wax lala yaabo in aanay dawladdu howlo intaa ka badan ka qaban, sida uu sheegay Forssmed.
Af-hayeenka xisbiga Liberalerna Mats Persson ayaa sheegay in dawladda aanay u muuqan caqabadaha ka taagan siyaasadda is-dhex-galka.
- Waxaa dalka ka kobcaya dabaqad hoose, sida uu sheegay isaga oo carrabka ku dhuftay dadyoowga dalka ku cusub.
- Looma baahna inay dawladdu sawir aan jirin ka bixiso xaaladdaiyo in dhibaatadu ay iyadu xal isu heli doonto. Dhibaatada ugu ballaaran ee dawladda la soo gudboonaatay waxay tahay in aanay ka soo bixi karin goolkeedii dhimista shaqa-la'aanta. Sweden waxay iminka taagan tahay shaqa-la'aan gaarsii-san 15%, sida uu sheegay Persson.
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa aamin-san in miisaaniyadaha dheeriga ah ee loo qoondeeyey ammaank, difaaca iyo xannaanada umulaha tahay dhabba sax ah, hase yeeshee ciidanka ammaanka iyo difaacu u baahnaan lahaayeen miisaaniyado ka ballaaran.
Oscar Sjöstedt, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga SD ayaa sheegay in xisbigiisu u qoondeeyay miisaaniyad dheeri ah shaqaalaha dawladda iyo xaaladahooda. Waa miisaaniyadda uu xisbiga SD soo ban-dhigi doono muddo toddobaadyo ka dhiman yihiin. Miisaaniyadda dawladda tooshka laguma saarin siyaasadda shaqada, sida uu qabo.
Xisbiga V oo xulufo dawladda kula ah miisaaniyadda guga ayaa ku qanacsan. Ulla Andersson. Af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga ayaa tooshka saartay is-bedelka dhaqaale ee miisaaniyadda guga ee howlaha cusbitaallada umulisooyinka, hayadaha adeegga bulshada iyo goobo dheeri ah ee shaqooyinka kuleeylaha - sommarjobb.
- Kolka uu xisbiga vänsterpartiet qayb ka yahay qorsheeynta miisaaniyadda dawladda ayaa laga dareemayaa is-bedello wax ku ool ah ee la xiriira hab-nolol wanaagga bulshada, sida ay sheegtay.
Vänsterpartiet ayaa aamin-san inay macquul tahay in canshuurta kor loogu qaado mushaarooyinka, hase yeeshee aanay u suurta-gelin muddadii uu wada-hadalku socday in laga ogolaado kor u qaadista canshuurta ee rasumaalka.
Miisaaniyadda Guga oo la soo bandhigay
tisdag 18 april 2017 kl 11.50